Waa mid ka mid ah ugu waaweyn iyo sababaha ugu badan ee sababa sharafta xogta iyo guud ahaan xallinta arrinta marka ay timaado tanaasulka macluumaadka. Waxaa jira tobanaan kun oo casriga ah iyo casriga oo aan sababaha keeni user dhinaca sirta ah iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in qofku waa in ay ogaadaan muhiimada ay leedahay ka hor xogta la Windows XP. Waxaa sidoo kale in la xuso in drives USB iyo ruuxaanta kaydinta dibadda yihiin qaar ka mid ah meelaha ay tahay in sharafta xogta tanaasulka iyo markii qalabka lagu markaas loo isticmaalo waxaa muhiim ah in la ogaado in sirta sidoo kale uu noqonayaa mid muhiim ah oo user ee arrintan la xiriira waa in hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah tallaabooyinka farshaxanka ah la qaado si loo hubiyo in xogta la hayo oo nabad iyo xasilooni. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah baahiyaha jira sabab u ah oo sirta loo sameeyaa:
Ammaanka 1. Data
Waa in la ogaadaa in sirta la sameeyo hab u keli ah koox yar og waxa laabta gudahood xogta iyo sabab la mid ah waxa loo helo hab ugu fiican. Sidoo kale waa in la ogaadaa in arrimaha la xiriira ammaanka xogta mid ka mid ah oo keeni in khasaare weyn adduunka oo dhan ay yihiin.
Sharafta 2. Data
Macluumaadka in lagu meeleeyo gudahood xogta la dhawray oo la sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in aan marnaba la wadaago si kasta. Waxaa sidoo kale in la xuso in ilaalinta ee sharafta waa wax loo baahan yahay oo ay dadka iyo ururada iyo halkan fikradda ah sirta waxa oo dhan aad si wanaagsan buu falaa.
Sida loo sir flash drive isticmaalaya BitLocker?
BitLocker waa ugu fiican iyo qalab daaqadaha lacag la'aan ah taas oo ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah marka ay timaado sirta xogta. Sidoo kale waa in la ogaadaa in la isticmaalayo qalab tani ma aha mid fudud oo dhan ah, sababo isku mid casriga ah kaliya dadka isticmaala bixio waa in si aad u hubiso in natiijada laga helo oo waafaqsan shuruudaha loo isticmaalo. Ka dib waxa weeye geedi socod ah oo uu soo qastiyey oo weliba waa arin aad u fudud in user a laylis sidoo kale u samayn karaa wixii kaloo ah oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
1. Jidka in la raaco by user waa Control Panel> System iyo ammaanka> BitLocker sirta Drive,
2. Liiska qalabka la soo bandhigi doonaa oo user ay u baahan tahay in la hubiyo in drive in ay tahay in la Windows XP ayaa BitLocker u soo jeestay oo ku saabsan:
3. Habka ugu fudud markaas waa in la soo xulay sida Unlock sirta ah sida ay u hubiyo in xogta ay weli amaan iyo kalsooni ka dhigi doonaa:
4. muhiim ah soo kabashada waa ka dibna in la ahbaa si loo hubiyo in haddii sirta ah waxaa markaas muhiim ah laga badiyay tan waxaa loo isticmaalaa in lagu furo qalabka. Waa in ay si nabad ah oo si ammaan ah lagu kaydin:
5. button Bilawga imayl markaas waa in la sii adkeeyey si aad u bilowdo nidaamka:
6. user waa in aynu dhamaystiran xaaladda bar ah:
7. sirta drive ayaa dhamaystiray buuxa:
Qaar kale waxay siyaabo of imayl flash
Waxaa jira qalab badan oo online oo loo hubiyo in hannaanka uu noqonayaa mid ammaan ah oo u fududahay user iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in dhamaan qalabka sidoo kale xor u yihiin inay soo bixi oo isticmaal. Tani waxay qayb ka mid ah tutorial la xaqiiqda wixii qalab user waa in ay isticmaalaan si ay u hubiyaan in habka sirta la soo gabagabeeyo ka qaban doonaan. Sidoo kale waa in la ogaadaa in qalabka ugu fiican in waxaa loogu talagalay sida baahida user ayaa halkan sharaxay si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo iyada oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Top saddex qalabka sirta waa sida soo socota:
Waa mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo barnaamijka u adeegsadaan marka ay timaado sirta iyo wax kasta ka sarreeya, waxay xor u yahay inuu ka soo dejisan iyo sida loo isticmaalo. User xaq u baahan yahay si loo hubiyo in URL http://download.cnet.com/Rohos-Mini-Drive/3000-2092_4-10629845.html waxaa soo booqday si aad u hesho wixii kaloo sameeyey oo kaliya u baahan yahay in la raaco Dardar iyo barnaamijka lagu rakibi doonaa si PC ama habka loo isticmaalay oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Isticmaalka barnaamijka waa mid aad u fudud oo meeshii ay sirta buuxa waxa ay sidoo kale taageertaa qayb sirta ka mid ah qalabka in la isticmaalo:
Sidoo kale waa mid ka mid ah barnaamijyada oo la hubiyo in wixii kaloo la sameeyo dib u dhac kasta oo aan user iyo sidoo kale helo natiijada ugu fiican ee arrintan la xiriira. Waa in la ogaadaa in user waa inuu isticmaalaa barnaamijka hoos khabiir kormeer ah sida isticmaalka guud ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah faahfaahinta casriga ah qaar ka mid ah iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in isticmaalka khaldan ee barnaamijka waxay horseedi karaan natiijooyin dhimasho iyo sidoo kale dhaawici kartaa hardware ah gebi ahaanba. Dhammaan nidaamyada file waxaa taageera barnaamijka iyo link download waa https://diskcryptor.net/wiki/Downloads meesha barnaamijka ayaa la dhigayaa download.
Ammaanka flash 3. USB
Waa barnaamij aan kaliya lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan, laakiin waxa ay sidoo kale hubineysaa in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay marka ay timaado sirta. Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican in uu yahay ma aha kaliya il furan laakiin waa 100% oo lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan iyo sabab la mid ah ayay sare waa in baahida marka ay timaado isticmaalka iyo guud bixinta farsamada. Waxaa sidoo kale in la xuso in flash waa barnaamij ah oo uu soo qiimeeyo sare by users iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user ku siin waa kubad si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican:
Ma loo baahan yahay si sir flash ah?
Ra'yiururinta ayaa soo socda ayaa la sameeyay si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada farshaxanka ee la xiriirta su'aasha in haddii ay lagama maarmaan tahay in sir flash ama aan. Jawaabta ku haboon waa in arrintan la xiriira la doortay si ay u helaan madarad aragti cad:
> Resource > Flash Drive > Sida loo sir flash ah si loo hubiyo in Safty xogta aad